Ahlu Sunna oo qarka u saaran inay la wareegto Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Ahlu Sunna oo qarka u saaran inay la wareegto Dhuusamareeb
Shalay waxay la wareegeen Guriceel, Maantana Ceeldheer, taasoo ka dhigan inay Ahlu Sunna isku fidinayso Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Galmudug ayaa qarka u saaran inay ka baxdo gacanta Qoor-Qoor, oo mudadii uu xafiiska joogey noqday adeegge daacad u ah MD hore Farmaajo.
Ahlu Sunna ayaa kusii siqaysa Dhuusamareeb, kadib markii Maanta la wareegtay degaanka Ceeldheer oo qiyaastii 30-KM u jira magaaladda, iyadoo tallaabada xigta noqon karto inay gudaha u galaan Caasimadda Galmudug oo mudo ku dhaw 2 sano dagaal looga soo saarey Sheekh Shaakir iyo Maclin Maxamuud.
Xaaladda Dhuusamareeb ayaa kacsan Maanta, iyadoo uu ku sugan yahay Qoor-Qoor oo shalay gaarey, isagoo ay ilaalinayaan Ciidamo uu ka watay magaaladda Muqdisho. Waxay Galmudug gashay marxalad cusub, oo horey loo filaynin, taasoo kusoo beegantay xili doorasho.
Ahlu Sunna ayaa sheegtay inaysan carqaladeyn doonin doorashadda, balse ay ka go'an tahay inay dib u qabsato goobihii horey Al-Shabaab uga saartay oo ay kamid yihiin Dhuusamareeb iyo degaanada ku dhaw, ee gobolka Galgaduud.
Walaac ayaa soo foodsaarey Qoor-Qoor oo xaaladda ku xun tahay, oo eeday ka maqnaashaha badan ee Galmudug, isagoo dayacay mas'uuliyadii uu u dhaartay, ee ah inuu u adeego shacabka iyo degaanka.
Maamul kasta oo soo mara Galmudug caqabad ugu weyn ee uu la kulmo waxay ahayd Ahlu Sunna illaa Xaaf uu kala heshiiyay oo ka mideeyay labadii Maamul ee ka jirtay, iyadoo Sheekh Shaakir noqday madaxa Xukuumadda.
Qoor-Qoor wuxuu isticmaalay falsafadii Farmaajo ee xoog ku maquuniska, taasoo maanta lugaha dhiiqo u gelisay, isagoo taagan meel cidlo ah, oo Villa Somalia aan u gurman karin.